दुनियाँ – Page6– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:४१ English
अफगानिस्तानमा तालिवानीको आक्रमण, १३ सैनिक मारिए १५ माघ २०७६, बुधबार १६:५६
एजेन्सी, १५ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । आगामी फेब्रुअरी २४–२६ मा उनले भारत भ्रमण गर्ने भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । तर ट्रम्पको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन । भ्रमणमा दुईदेशबीचको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने..
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो, १६ देशमा संक्रमण पुष्टि १४ माघ २०७६, मंगलवार ०९:४१
एजेन्सी, १४ माघ । चीनमा कोरोना भाइरसका कारण १०६ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ हजारभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन् । भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न चीनमा यातायात आवागमनमा थप कडाइ गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म कम्तीमा १६ देशका मानिसमा यसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । चीनमा..
अफगानिस्तानमा ८३ यात्रु सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त १३ माघ २०७६, सोमबार १६:५८
एजेन्सी, १३ माघ । अफगानिस्तानमा यात्रुबाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । त्यहाँस्थित स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पूर्वी अफगानिस्तानको गजनी प्रान्तमा विमान दुर्घटना भएको हो । स्थानीय समय अनुसार १ः१० बजे सरकारी स्वामित्वको एयर एरियाना विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।..
एजेन्सी, १३ माघ । भारतले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बिमान सेवा एयर इन्डियाको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । भारतको आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व सङ्कलनमा प्रभाव पर्न थालेको भन्दै कम्पनीमा थप पूँजी लगानी नगर्ने भन्दै भारत सरकारले सबै सेयर बिक्रिको योजना सार्वजनिक गरेको हो । भारत सरकारले..
भारतमा पनि देखियो कोरोना भाइरस १० माघ २०७६, शुक्रबार १६:५१
एजेन्सी, १० माघ । चीनबाट फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरस भारतमा पनि देखिएको छ । भारतको मुम्बईमा गरिएको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा दुई व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार मुम्बई अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा दुई..
डढेलो बढेपछि अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा विमानस्थल बन्द ९ माघ २०७६, बिहीबार १३:२४
एजेन्सी, ९ माघ । अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराको विमानस्थल बन्द गरिएको छ । डढेलो फैलिएर नजिक आएपछि संसद्‌ भवनबाट २० मिनेटको दूरीमा रहेको विमानस्थल बन्द गरिएको हो । दक्षिण र पूर्वका क्षेत्रहरूमा फेरि डढेलो फैलिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । क्यानबेरामा भने दुईवटा डढेलो..
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सबै यातयात ठप्प
एजेन्सी, ९ माघ । कोरोना भाइरसको संक्रमण व्याप्त भएपछि चीनको वुहान नगरमा सबै उडान, रेल तथा बस सेवा बन्द गरिएको छ । श्वाप्रश्वास सम्बन्धी समस्या उत्पन्न गराउने भाइरसको सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन चिनियाँ अधिकारीहरूले यो कदम चालेका हुन् । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट चिनियाँ सहर वुहानबाट..
इन्डोनेसियामा पुल भत्कियो, ७ जनाको मृत्यु ६ माघ २०७६, सोमबार १४:५६
एजेन्सी, ६ माघ । इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपमा एक पुल भत्किँदा कम्तीमा सात व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । कावर शहरको भर्खरै मात्र निर्माण भएको सो पुलमा करिब ३० जना विद्यार्थिहरु पुल पार गर्न लागेको अवस्थामा अकस्मात पुल भत्किएको थियो । मुसलधारे वर्षाका कारण यस पुलमुनिको नदीमा पानीको..
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गरे कानुन सुधारको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा २ माघ २०७६, बिहीबार ०९:३७
एजेन्सी, २ माघ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले हालको संवैधानिक प्रावधान सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपतिको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको सट्टा संसदले नै प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रिपरिषद् सदस्य..
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध रोक्ने सम्झौता
एजेन्सी, २ माघ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध रोक्दै लैजाने सम्झौतामा भएको छ । वाशिंगटनस्थित दुवै देशका अधिकारीहरुबीच व्यापार युद्ध कम गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग बलियो सम्बन्धको सुरुवात भएको बताएका छन् । चीनका..
चिप्लिएर लड्दा भारतीय सेना पाकिस्तान पुगे २९ पुष २०७६, मंगलवार १३:३८
एजेन्सी, २९ पौष । हिउँमा चिप्लिएर भारतीय सेना पाकिस्तान पुगेका छन् । उनलाई पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । भारत प्रशासित जम्मु कस्मिरको गुलमार्गमा गस्ती गरिरहेको अवस्थामा अचानक हिउँमा चिप्लिएर भारतीय सेनाका हबिल्दार राजेन्द्र सिंह नेगी पाकिस्तानी भू–भागमा पुगेका थिए..
इरान विमान दुर्घटना प्रकरणः ब्रिटिश राजदूत पक्राउ २७ पुष २०७६, आईतवार १५:३५
बिबिसी, २७ पौष । युक्रेनी यात्रुवाहक विमानलाई ‘भुलवश’ खसालिएको इरानी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेपछि तेहरानमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा इरानका लागि ब्रिटिश राजदूत पक्राउ परेका छन् । राजदूत रब मकेयरलाई तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई ब्रिटेनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय..
पाकिस्तानको मस्जिदमा विष्फोट हुँदा १४ जनाको मृत्यु २६ पुष २०७६, शनिबार ११:०४
पाकिस्तान, २६ पौष । पाकिस्तानको एक मस्जिदमा विष्फोट हुँदा १४ जनाको ज्यान गएको छ । बलुचिस्तान प्रान्तको क्वेटा शहरमा रहेको उक्त मस्जिदमा भएको विष्फोटमा परी २१ जना घाइते भएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । विष्फोटमा परी क्वेटाका डीएसपी अमानुल्लाहको पनि मृत्यु भएको छ ।..
बस र ट्रक ठोक्किँदा २० यात्रुको मृत्यु
उत्तरप्रदेश, २६ पौष । भारत उत्तरप्रदेशस्थित कन्नौजमा ट्रकसँग ठोक्किएर बसमा आगो लागेको छ । दुर्घटनामा परी कम्तिमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । बस र ट्रक ठोक्किनासाथ आगो दन्किएको थियो । बसमा ५० जना यात्रुहरु थिए । २१ जनालाई बसबाट उद्धार गरिएको छ । कतिपय यात्रुले भने बसबाट हाम फालेर ज्यान..
इरान विमान दुर्घटनाः १७६ को मृत्यु, कुन देशका कति ? २३ पुष २०७६, बुधबार १५:४७
एजेन्सी, २३ पौष । इरानमा विमान दुर्घटनामा परी १७६ जनाको मृत्यु भएको छ । विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने १७६ जनामध्ये ८२ जना इरानी नागरिक छन् । ६३ जना क्यानेडियन, ११ जना युक्रेनी, १० स्वीस नागरिक, ४ जना अफगानीस्तानी, ३ जना जर्मन नागरिक र ३ जना बेलायती नागरिक छन् । युक्रेनको..